​अझै पनि सोझै उक्लने आशंका
Saturday,2Mar, 2019 1:03 PM
ज्यानमा तागत हुँदाहुँदै घर जानुपर्ने, क्यासिनो र अस्पतालमा जागिर माग्न दौडनुपर्ने दुःखबाट अब नेपालका पुलिसहरुले मुक्ति पाउने भएका छन् ।
फागुन अन्तिम या चैत पहिलो साताभित्र अनुमोदन भई वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने संघीय प्रहरी ऐनले उमेर ५८ वर्ष हुँदासम्म जागिर खान पाउने प्रावधान राखेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । तर, यही व्यवस्थाको कारण माथिल्लो दर्जाका केही प्रहरीले नचिताएको अवसर पाउने र केही उच्चदर्जाका अफिसरको करिअर खतरामा पर्ने खतरा छ ।
संघीय प्रहरी ऐनले आइजिपीको ३, एआइजीको २, डिआइजीको ५, एसएसपीको ६ वर्षे सेवा अवधि किटान गरेको छ । उमेर र पदावधिमध्ये जे अगाडि आउँछ, त्यसअनुसार अबका प्रहरीले जागिरबाट रिटायर्ड हुनुपर्ने भएको छ । सँगै, लामो कसरतपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले एआइजीको थप दरबन्दी पाउने भएका छन् । दुवै संगठनले तीन–तीनका दरले एआइजी दरबन्दी थप मागेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले दुई–दुई दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्भावना रहेको बुझिन्छ । नेपाल प्रहरीमा एउटा डिआइजी पद रिक्त छ । तर, त्यसका लागि एक दर्जन उम्मेदवार खडा भइदिँदा एआइजी दरबन्दी थप भएपछि मात्र बढुवा निकाल्ने तयारी रहेको गृहस्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ०२३ वैशाख १३ जन्ममिति भएका अहिलेका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल ०८१ सालमा ५८ वर्षका हुन्छन् । तर, महानिरीक्षकको तीन वर्षे पदावधिअनुसार ०७७ चैत ३१ गते अवकाश पाउँछन् । यदि आइजी नियुक्त गर्दा नै प्रधानमन्त्रीले सर्वेन्द्रलाई तपाईं र पुष्करबीच आधी आधी कार्यकाल हो है भनेको खबर साँचो हो भने कुरा बेग्लै नत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार अहिलेका एआइजीहरु पुष्कर कार्की, धीरु बस्नेत र ठूले राईहरुले आइजीभन्दा अगाडि नै अवकाश पाउँछन् र अहिले दरबन्दी स्वीकृत भएमा त्यसअनुसार बढुवा हुने ९० टोलीकै एआइजीमध्येबाट एकजना आइजी हुन्छन् । यदि दरबन्दी स्वीकृत भएमा बढुवाको लाइनमा केदार रिजाल, पिताम्बर अधिकारी, सुरेशविक्रम शाह एआइजीका दावेदार छन् र यीमध्येबाट ०७७ चैतमा एकजना आइजी पनि हुन्छन् ।
तर, यस्तो भयो भने आइजीको लाइनमा रहेको त्यसपछिको टोली डिआइजीबाटै घर जानुपर्ने हुन्छ । यो ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो व्याचले पद ओगट्ने कारण ठाकुर ज्ञवाली, शैलेश थापाक्षेत्री, निरजबहादुर शाही, हरिबहादुर पालहरु डिआइजीबाटै अवकाश हुने खतरा रहन्छ । यो व्यवस्थाले धीरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, विश्वराज पोखरेल, बसन्त लामाहरुलाई पनि डिआइजीबाटै घर पठाउने स्थिति रहन्छ । र, हालै एसएसपीमा बढुवा भएका सन्दिप भण्डारी, दीपक थापा र श्यामलाल ज्ञवालीहरुमध्येबाट प्रहरीले नेतृत्व पाउने अवस्था हुन्छ ।
उता, घरेलु कामदारको रुपमा प्रहरी खटाइएको र अझै सबै फिर्ता नभएको कुराको त ठूलै चर्चा छ । तर, दिनरात जिउ तन्काएर तन्दुरुस्त राखिने नं. १ गणका प्रहरीलाई एकजना महिलाले चलाएको डान्स इन्स्टिच्युटमा गार्ड बस्न पठाइएको गाइँगुइँ चलेपछि हेडक्वार्टरमा हल्लिखल्ली छ । दुई–चार दिन हैन, तीन वर्षदेखि सधै टंगालस्थित एक डान्स इन्स्टिच्युटमा त्यसरी गणका प्रहरी ड्युटीमा जाने गरेका थिए । कारण खोज्दा यस्तो पत्ता लाग्यो, तीन वर्षअगाडिका कुनै एआइजीसँग निकटस्थ महिलाले चलाएको उक्त इन्स्टिच्युटमा प्रहरी पठाउन थालिएको रहेछ । ती हाकिम रिटायर्ड भएपछि पनि गणका एसपीलाई फोन गरेर हाकिमले ड्युटी खटाउने गरेको कारण पठाइँदै आएको हो ।
पत्रकारले मर्दामर्दै खिचेको भिडियोबारे जनआस्था सम्पादकको खुलासा
आखिर के छ त्यसमा अचम्म
​पीएहरुले कसरी पिए, कसरी जिए
​बलात्कार पनि ड्युटीभित्रै पर्छ ?
​झेलीमा जर्नेल झिकाइए